एउटा कन्डोमको विज्ञापनले यसरी मच्चायो तहल्का
कन्डोमको काम हो यौन सम्पर्कलाई सुरक्षित राख्नु र इच्छाविपरीतको गर्भधान रोक्नु । कन्डोम बनाउने कम्पनीहरुले पनि आफ्नो विज्ञापनमा यही सन्देश आम नागरिकसम्म पुराउने कोशिस गर्दछन् । विज्ञापनहरुको कोशिस हुने गर्दछ कि नयाँ र रचनात्मक तरिकाबाट नाम नागरिकसम्म आफ्नो कुरा बुझाउन सकियोस् । तर, रचनात्मकताको पनि एउटा सीमा हुन्छ र सानो चुकले ठुलो नोकसानी पराउन सक्दछ […]
भारतको ओडिसा राज्यको भद्रक जिल्लामा मंगलबार एकजना युलीयुगी पिताले मोबाइल फोन र रक्सी किन्न आफ्नै ११ महिनाको छोरा बेचेका छन् । प्रहरीले आरोपीलाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले आरोपी बलराम मुखीलाई २३ हजारमा आफ्नो छोरो बेचेको आरोप लगाएको छ। आरोपी पिताले दुई हजारमा मोबाइल फोन र १५ सय मा छोरीका लागि पायल किनेका थिए । उनले […]
विचित्रः सात वटा दाँतसहित बच्चा जन्मिएपछि….
के तपाई दाँतसहित बच्चा जन्मिएको सुन्नु भएको छ ? यो बच्चा मात्र एक महिनामा छन् र विचित्रको कुरा उसको मुखमा सात वटा दाँत छन् । घटना भारतीय राज्य गुजरातको अहमदावालको हो । यो घटना त्यतिबेला सार्वजनिक भयो जतिबेला बच्चालाई दुध खुवाउन समस्या भयो । र, उसलाई अस्पताल लगियो । बच्चाको जाँचपछि अपरेशन गरेर सबै सात […]
महिलाको स्तनको काम के के होला ? एउटा पुस्तक यसरी फस्यो विवादमा
युवाहरुका लागि प्रकाशन गरिएको प्युबर्टी गाइडका अनुसार महिलाको ‘स्तन’ को अस्तित्वको मात्र दुई वटा कारण छ । पहिलो–बच्चाका लागि दुध उत्पादन गर्नु र दोस्रो–युवतीहरुलाई जवान र आकर्षक देखाउनु । यो प्युबर्टी गाइडको नाम ग्रोइंग अप फर ब्वाइज हो, जसमा अगाडि लेखिएको छ–वास्तवमा अधिकांश स्तन, यो दुई काम गर्न सक्दछ। ग्रोइंग अप फर ब्वाइज नामको यो […]
एउटा पार्क जहाँ निःवस्त्र भएर आराम गर्न पाइन्छ
फ्रान्सको राजधानी पेरिस नजिकै एउटा पार्कमा नाङ्गा मानिसहरुका लागि अलग्गै व्यवस्था छ । पार्कमा फुटबल पिचजत्रै ठुलो भागलाई १५ अक्टोबरसम्म प्रयोगका रुपमा खोलिएको हो । अधिकारीहरुका अनुसार यो भागमा कुनै पनि प्रकारको अभद्र व्यवहार सहन गरिने छैन । राम्रो व्यवहारको सूची पार्कमा राखिनेछ । पार्क प्रमुख तथा डिप्डी मेयर पेनेलोप कोमाइट्सले भने–पेरिसको सार्वजनिक स्थलको उपयोग […]